Kpido: Ngụda oge | Martech Zone
Tag: Nguko oge
Real-Time Solutions Iji Mma gị Email njikọ aka
Fraịde, Machị 6, 2015 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndị ahịa na-enweta ihe ha chọrọ site na nkwukọrịta email? Ndị ahịa ọ na-efu ohere ịme mkpọsa email dị mkpa, nke bara uru ma na-arụ ọrụ? Ndi ekwenti n’onu onwu nke ndi ahia email? Dika nyocha emere na nso nso a nke Liveclicker nke The Relevancy Group duziri, ndi ahia na-ekwuputa enweghi obi uto ha na ozi-e metụtara ahia na-egosi na ngwaọrụ mkpanaka. Nnyocha nke ihe karịrị 1,000 na-ekpughe na ndị na-ere ahịa nwere ike na-efunahụ ndị na-azụ ahịa na-eji ekwentị
Usoro 5 iji weta ozi ịntanetị gị na ndu
N'ime ihe karịrị 68% nke email niile ịbụ SPAM, ọ bụghị naanị na ọ na-esiri ike ịnweta email gị na igbe mbata, ịmepe ya na ọdịnaya ịpịre chọrọ ezigbo nlebara anya. Veragbado ọdịnaya email na-adị ndụ nwere ike ịbụ atụmatụ nke na-etinye ozi ịntanetị gị n'elu. Gụnyere ọdịnaya email dị ndụ nke na-agbanwe na oge bụ isi ihe iji nyefee ndị debanyere aha gị ozi dị mkpa n'oge kwesịrị ekwesị. Na infographic n'okpuru